Xiriirinta Daryeelka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka > Xiriirinta Daryeelka
Baro wax ku saabsan kahortaga isdilka ee CHPW ee xubnahayaga.
Kaligaa ma tihid: Xiriirinta Daryeelka ayaa diyaar u ah in lagu caawiyo.
Markii aan kali dareemno, halgankayaga caafimaadka maskaxda ayaa ka sii adkaanaya wax ka qabashadiisa. Qorshahaaga caafimaad ahaan, waan ku taageeri doonnaa markaad dareento heerkaaga ugu hooseeya inaan ku ilaaliyo caafimaadkaaga iyo badbaadadaada.
Xiriirinta Daryeelka waa barnaamij fidinta kahortagga ismiidaaminta oo ku saleysan run fudud: anaga ayaa danaynayna oo halkaan u joognaa adiga.
Xubnaha barnaamijka waxay helayaan waraaqo ama fariimo qoraal ah mudo hal sano ah. Farriimaha waa kuwo kooban, taageero leh, oo daryeel leh. Waxaan kuu rajeyn karnaa dhalasho wanaagsan ama ku dhiirrigelin isbitaalka kadib.
Waxaa jira ficil looma baahna dhankiina. Fariimaha ujeedadooda kaliya ayaa ah inay bixiyaan daryeel iyo walaac. Iyo barnaamijka Iskuxirka Daryeelka waa ikhtiyaari ah. Waxaan kuu soo diri doonaa kaliya fariimaha hadaad ogolaato inaad hesho.
Maxaa dhacaya haddii aan ka jawaabo fariin qoraal ah?
Kooxdayada Xiriirka Daryeelka waxay ku faraxsan yihiin inay kaa maqlaan waxaadna heli doontaa jawaab shaqsi ahaaneed ee qoraalkaaga hal maalin ganacsi gudahood.
Ayaa uqalma Xirmooyinka Daryeelka?
CHPW waxay si firfircoon ula xiriirtaa xubnaha loo soo gudbiyo maareeyayaasha dacwada iyo shaqaalaha kale ee CHPW. Waxaad sidoo kale isku gudbin kartaa adoo email ugu diraya Maareynta Kiiska [emailka waa la ilaaliyay] ama adiga oo waca 1-866-418-7004 (TTY Relay: Garaac 711).
Arimahaaga gaarka ah
CHPW waxay haysaa macluumaadkaaga caafimaadka si gaar ah. Waxaan kaliya la wadaagi doonnaa bixiyeyaashaada daryeel, ama sidii loogu baahdo inaan ku taageerno caafimaadkaaga iyo ladnaantaada.
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad is disho, waxaa jira ilo kaa caawin kara:
Khadka Talo bixinta Kalkaalisada: 1-866-418-2920
Khadka Caawinta ee Washington 1-866-789-1511
Lifeline Lifeline of National Self-Cause: 1-800-273-8255
Khadadka Caawinta Dhibaatooyinka Deegaanka ee gobolka Washington
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 24, 2021